umshini wokuxubha wokuthengisa uyathengiswa,Umshini wokuxubha ubambo ngokunemba okuphezulu
Thayipha:Umshini wokuxubha ovundlile
Ikhono:2000~ 300kg / h
Isetshenziselwa:ukwenza izinkukhu feed, izinhlanzi,ukudla kwekati,ukudla kwenja,Ukudla kwezilwane zasekhaya
Umshini wokuxubha ubambo umshini wokuxubha osebenzayo futhi oguquguqukayo wokuxubha imifino eyomile & powders homogeneously. Olunye uhlelo olusetshenzisiwe lomshini we-ribbon blender ukuxubanisa ufulawa wokusanhlamvu nokunye okunomsoco esitshalweni se-pellet. Ngesikhathi senqubo yokuxuba, ungangeza obunye uketshezi kufulawa yokusanhlamvu, ukwenza ama-pellets okondla okunempilo okuningi. Umshini wokuhlanganisa iribhoni ulungele kahle ukufakelwa kwangaphambi kwengxube ye-feed ngokwenza i-aquaculture, izinkukhu kanye nezinhlanzi ezidliwayo . I-ribbon mixer nayo ingasetshenziselwa ukuxuba imikhiqizo yamakhemikhali, Umanyolo, okungeziwe, imikhiqizo yokunakekelwa kwempilo, njll .Umshini womshini ojikelezayo we-blender umshini ungaba insimbi engenacala noma insimbi yekhabhoni . Lo mshini wokuhlanganisa okuphakelayo uqukethe isitsha, amabala e-helix nezingxenye zokudlulisela. Ama-helix blants akumahlathi amabili. I-helix yangaphandle izohambisa okubonakalayo kusuka ezinhlangothini zayo ezimbili kuya engxenyeni ephakathi, kuyilapho i-helix yangaphakathi izodlulisela okuqukethwe ezinhlangothini zombili,enza ukuhlangana kokuxubha. lapho sisebenzisa izinhlobo eziningi zezinto zokwakha ukwenza ama-feed pellets a ifulethi lokufa elishubile, kufanele sisebenzise umshini wokuxuba ukudla ukuze uhlanganise izinto.
Okuphakelayo kwemishini yokuxuba
1. Isetshenziselwa ukuxuba i-powder ehlukahlukene yokusanhlamvu ukwenza ama-pellets okondla okunomsoco, ikakhulukazi izinhlanzi, i-shrimp nezinye ama-pellets okondla zasemanzini.
2. Le mixer yeribhoni yokudla ifakwa ngokusebenza okuphezulu, ukusebenza okuthembekile nokuhlala emhlabeni okuncane, ukukhetha okuhle kwesitshalo se-pellet esine-workshop encane.
3. Amasondo ajikelezayo aqondiswa kabili enza amandla okuxubana ngokuphelele, CV≤7 ％.
4. Isikhathi sokuxuba esifushane sayo yonke iqoqo lezinto zokwakha. 3-6 imizuzu ye-500-4000kg feed powder.
5. Umklamo womnyango omkhulu ovulekile uqinisekisa ukukhipha ngokushesha nokusala kwezinto ezibonakalayo.
6. Ingafakelwa nge-nozzle eminingana yokufaka uketshezi.
7. Ukuhanjiswa okumshelelezi nokugqoka okuphansi. Izinto ezintathu ongazikhetha: insimbi engagqwali, i-carbon iron kanye nezinto ezibonakalayo.
8. Umphumela wokuxuba awuthonywa yimfanelo yempuphu kanye nobukhulu. I-ribbon mixer nayo ilungele izinto ezibonakalayo.
Kungani Khetha Umshini Wokuhlanganisa we-Ribbon Okuphakelayo Eziphondweni Ze-Pellet
1. Umshini we-Ribbon feed blender unemiphumela emihle yokuxuba ye-powder & uketshezi, imikhiqizo ye-granule kanye nemicu, ikakhulukazi yokuxuba ufulawa wokusanhlamvu.
2. Lo mshini wokuxubha okuphakelayo ngeke ukhiqize imiphumela yokushisa ngokweqile nemiphumela yokuphakelwa kwengcindezi lapho kucutshungulwa izinto zokwaliwa. Umsoco wefulawa yokusanhlamvu ngeke wonakale ngenkathi kuxutshwa.
3. Ngokuqondene nezinto zokwenziwa ezinesilinganiso esilinganayo nosayizi wegranule, lokhu umshini wokuxuba okuphakelayo ngeke kuholele ukubeka imiphumela ehlangabezana ngokuphelele nesidingo sokuhlanganiswa kokuphakelayo kwezinto zokusetshenziswa ezahlukahlukene.
4. Ungangeza uketshezi kahle ngenkathi uxubha.
5. Ukujikeleza kokujikeleza kuqinisekisa umphumela wokuxubana osebenzayo futhi ongahluziwe.
6. Izici ezinhlanu ezishiwo ngenhla ziqinisekisa ngokuphelele izindinganiso zokuxuba impahla ye-pellets. Ngakho-ke i-Amisy ribbon blender ngumshini wokuxubha okuphakelayo we-feed ukukhiqizwa kwama-pellets, ikakhulukazi izinhlanzi, ama-shrimp namanye ama-pellets asemanzini asolwandle.
Ukucaciswa komshini wokudla we-ribbon feed
1000~ 1500kg / h